गुल्मीको धान दिवसमा किन आलोचित भए डिएसपी श्रेष्ठ ? के गरे उनले के गरेनन् ? (फोटो-अडियो) – Gulmiews
गुल्मीको धान दिवसमा किन आलोचित भए डिएसपी श्रेष्ठ ? के गरे उनले के गरेनन् ? (फोटो-अडियो)
१९ असार २०७२, शनिबार १३:०७ Raju Gautam
गुल्मी, असर १९ । काठमाण्डौंबाट सञ्चालित एक अनलाईन मिडियामा गुल्मीका डिएसपी हिमालयकुमार श्रेष्ठ आलोचित भए भन्ने समाचार पढ्दा म छक्क परे । गुल्मी हस्तीचौर–२ का गुरुवा फाँटमा भएको असार १५ को रोपाई जात्रा तथा १२ औं धान दिवसको सुरु देखि अन्तिम सम्म नजिकबाट रिर्पोटिङ्ग गर्ने म हुँ । मैले डिएसपी श्रेष्ठ विरुद्धको समाचारको खण्डन गरेर उनको बचाउ गर्न खोजेको होईन ताकी मैले जे देखे त्यही लेख्दै छु ।
हामी सदरमुकाम तम्घासबाट दर्जनौ गाडीमा एकै साथ त्यस स्थानमा पुगेका हौं । त्यहाँ पुगे पछि सह–आयोजक भुदेव कृषि सहकारी संस्था हस्तीचौरका अध्यक्ष शेरबहादुर कुँवर सहितका स्थानियवासीले भव्य स्वागत गरे । त्यस पछि औपचारिक कार्यक्रम सुरु भयो ।
त्यसलाई एकदमै छोटो बनाएर हामी सवै खेतमा रोपाई गर्न पस्यौं । केहि पत्रकारहरुले फेर्ने कपडा न लगेकोले होला वाहिरै बाट रिर्पोर्टिङ्ग गर्नु भयो । म , शिव सुवेदी टोपलाल अर्याल खेतको गरामा पसेर हिलो छ्यापछ्यापमा रमाउन थालियो ।
सिडियो चन्द्रप्रसाद गैरे, डिएसपी श्रेष्ठ र अन्य कार्यालय प्रमुमहरु, नेपाली कांग्रेसका सचिव विष्णु वलाल सहितका दलका नेताहरु , तम्घासबाट जानु भएका लेकवेसी आमा समुहका दर्जनौं दिदी वहिनीहरु र स्थानियवासी खेत रेपाई जात्राको रौनकमा रम्नु रमियो ।
सिडियो र डिएसपी अलि तर्किन खोज्दै थिए । तर सहभागिले छाडेनन् । हिलो छ्यापन सुरु गरे । वाली गित संगै पञ्चे वाजा घन्कीएको थियो । उनिहरुलाई पनि नचाई हाले । आखिर ठुलो होस् वा सानो उ पनि एउटा नेपालीकै छोरा हो वाजा तालले मन नाचि हाल्छ । उनिहरु प्नि खुव नाचे ।
कार्यालय प्रमुख मध्ये डिएसपीको नाच उत्कृष्ट रहेछ । उहाँ संग नाच्न सवै युवाहरु झुम्मीए । त्यो देखेर मलाई पनि नाचौं नाचौं लागेर उहाँ संगै नाचे । अनि रेकर्डर अन गरेर डिएसपीलाई सोधे तपाई पहिला पनि यस्तो वालीमा झुम्नु भएको थियो ? ‘ किन न झुम्ने आखिर म पनि त यहि गुल्मीको छिमेकी जिल्ला पाल्पाको मान्छे हुँ ’– उहाँको यस्तो जफाव दिए ।
तर हिलोमा यादै भएन छ , रकडर्र अन गर्छु भनेको अफ गरे छु । सिडियो, अनि विष्णु वलालको पनि भनाई लिए । खेत रोप्दै गरेकी विष्णु दिदी लगायतका महिलाहरु संग पनि रेडियो कुराकानी गरे । नाच गितले सवै जना उत्तेजित थियौं । मेरो रेडियो रिर्पोटलाई रमझम पार्नका लागि त्यो नाचमा बढि हुटिङ्ग गर्ने र कुर्लिने मैं थिएँ । लोक गायक हरि खत्री र चुराबहादुर खत्रीका गितहरुले हामी सवैलाई धेरै नचायो । नाच्दा नाच्दै दर्शनीहरु थाके पछि हामी आफैले वाजा बजाउन थाल्यौं ।
डिएसपी श्रेष्ठले छातीमा दमाह बोकेर बजाउन थाल्नु भयो । लगत्तै वन अधिकृत विशाल घिमिरेले झ्याली वजाउनु भयो । आयोजक संस्था कृषि विकास कार्यालयका वरिष्ठ कृषि अधिकृत चेतनाथ अधिकारीले पनि दमाह वोकेर बजाउँदै हुनुहुन्थ्यो । त्यो दृश्यले मलाई छोयो र मैले धेरै पटक फोटो खिचे तर हिलोले त्यो तस्वीरको विचमा कालो डाम देखायो । यस्तै कसैले सहयनाई कसैले ढोलाकी लगायतका वाजा बजाउँदै र नाच्दै रोपाई जात्रा समापन भयो ।
सवै जना अलि तलको गुर्वा खोलामा नहाउन गयौं । फाँट देखि माथीको घरमा दहि चिउरा खाने कार्यक्रम थियो । सवै जना दलानमा बसेर खाँदै थियौं । मैले पहिल्लै खाई सकेको थिएँ । अलि पछि सिडियो र डिएसपी लगायतका कार्यालय प्रमुखहरु आएर खाना सुरु गरे । सिडियो फरासीला हुनु हुँदो रहेछन् ।
खाँदै हामीहरु संग निकै हेम्मिएर बोल्नु भयो । केहि छिन निकै गफ गरियो । त्यही क्रममा एक जना महिलाले डिएसपी श्रेष्ठलाई ठट्टा गर्न खोज्नु भयो । त्यस पछि डिएसपीले पनि ठट्टैमा मुखाभरीको जवाफा दिए पछि ठट्टा बन्द थियो ।
तर सिडियो साव नजिकै आएर फेरी टट्टा निकाल्न थाल्नु भयो । निकै रमाईलो लागेर हामी उहाँका गफ तिर केन्द्रित भयौं । केहि वेर पछि सिडियो साव व्यवहारिक कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो । केरा मिसाएको दहि थपी थपी खाँदा र रोपाईको दृश्य हेर्दा उहाँ भन्दै हुनुहुथ्यो जागिरे जिवनको विसौं वर्ष पछि किशोर अवस्थामा फर्किएँको महशुस भयो ।
अरु सवै गए पनि म त्यस रात त्यहाँ वसेर सालैजो र लोपन्मुख सुनिमाया रेकर्ड गरेर लैजाने कार्यक्रम थियो । शेरबहादुर दाईले गाउने मानिसहरु तय गर्नु भएको थियो । एक झलक सिडियो लगायतका कार्यालय प्रमुखहरुलाई पनि देखाउ भन्ने सल्लाह भयो । हुन्छ भनेर घर देख तल बाटोमा कार्यक्रम सुरु भयो ।
त्यही रिर्पोटमा सिडियो र डिएसपीको पनि प्रतिकृया लिएँ मैले । डिएसपी अलि भाउ खोज्दै हुनुहुन्थ्यो । मेरो पालो समातेर नाच्न उठाएँ सवै गलल्ल हाँसे । उहाँ खुव नाचेर हिड्न थाल्नु भयो । त्यस अघि दुईटी वहिनीलाई मैले कृषि विकासको गाडीमा चढेर जानुस भनेर पठाएको थिएँ तर पर हिडेर गएका उनिहरुलाई त्यस गाडीले लगेन छ । फोन आयो दाई मलाई त लगेन त्यो गाडीले भनेर । अनि मैले वसमा चढेर जाउ भनेर भने ।
सवै गए म त्यही वस्ने कार्यक्रम तय गर्दै थिएँ तर तम्घासबाट फोन आए पछि फर्किनै पर्ने भयो र फर्के । साना गाडी छुटे पछि वसमा चढे । तम्घास आउदा स्थानिय रेडियोमा समेत समाचार दिने समय सकिएको थियो । अर्को दिन भुकम्प पिडितहरुको अवस्था बुझ्न नेटा गाविसमा जानु थियो ।
त्यसैले हतार हतार रेडियो गुल्मीमा गएर रेकर्डरका ति अडियोहरु कम्प्युटरमा खन्याएर महेश बोहरालाई जोडेर प्रशारण गर्नु र म सम्वद्ध सवै रेडियो र अनलाईनमा पठाई दिनु भनेर लागे नेटा तर्फ । तर नेटले काम नगरे पछि त्यो असार १५ विशेष रेडियो कार्यक्रम गुल्मीमा मात्रै वज्यो अन्यत्र वज्न पाएन् ।
नेटा बाट फेरी म पिपलधाराको कार्यक्रम फेला पार्न जानु पर्ने भयो । हतार हतार तम्घास आएर तत्कालै पिपलधारा लागे । तेश्रो दिन तम्घास आई पुग्दा डिएसपी श्रेष्ठ विरुद्धको समाचार आएको छ भन्ने थाह पाएँ । रेडियो स्काईमा आएर
त्यो अनलाईन खेलेर हेर्दा त्यस्तो समाचार देखे । सुरु देखि अन्तिम सम्म म त्यस रोपाई जात्रामा भएकोले धेरैले त्यो समाचार मैले नै लेखे होला भन्ने ठानेर कतिपयले मेरो आलोचना पनि गरे । तर म स्पष्ट पार्न चाहन्छु त्यो मैले लेखेको होईन् ।
सत्य यहि हो कि सिडियो डिएसपी लगायतका सदरमुकामबाट गएका सवै सुरु देखि अन्तिम सम्म संगैं छौ । त्यस दिन हामी को ठुलो को सानो भन्दा पनि भाई वन्धुका हैसियतले रमेका छौं । सिडियो डिएसपी लगायतका कार्यालय प्रमुखहरुले कुनै महिला माथी अभद्र व्यवहार गरेको वा कुनै शव्द र हाउभाउबाट पदिय मर्यादा विपरित कार्य गरेको मैले देखिन् ।
नाचेर , हिलो छयापाछ्याप गरेर पदिय मर्यादा तोडेको ठहरिन्छ भने सिडियो लगायतका अन्य कार्यालय प्रमुखहरुको पनि तोडिनु पर्ने । आखिर किन डिएसपी मात्रै आलोचित भए भन्ने समाचार आयो ? त्यसवारे म अचम्वीत भएको छु । स्थानिय टेलिभिजको हवला दिदै लेखिएको डिएसपी विरुद्धको समाचारका विषयमा मेरो भन्नु केहि छैन ।
यहाँ निर म स्मरण गर्न चाहन्छु अघिल्लो वर्ष चौरासी फाँटको असारे पन्ध्र कार्यक्रमको । अदि मर्यादा विपरित कार्य भएको हो भने त्यहाँ भएको थियो । कति वेला पुरुषले महिलालाई काँखमा उचालेर हिलोमा गाड्ने त कति वेला पुरुषलाई उचालेर महिलाले हिलोमा गाडेर छातीमा चढ्ने गरेका थिए ।
उत्तेजनाकै कुरा गर्ने हो भने त्यति वेला पुरुषलाई एक कदम उछुनेर केहि महिलाहरु उत्तेजित बनेका थिए । पानीले भिजेका कपडाहरुले शरिरका अंग प्रत्य अंग छुट्टाएको थियो । पुरुषहरु पनि भिजेको शरिरमा कामुक देखिन्थे । हिलो छ्याप्ने नाममा कतिपयले सिमा नाघेका पनि थिए । तर त्यो दृश्य मैले यसपाली हस्तीचौरका त्यस फाँटमा देखिन ।
मेरो भन्नु यति हो कि जुन वेला नकरात्मक समाचार आउछन त्यति वेला मैं माथी शंका गर्ने मानसिकता त्याग्नुहोस् । मैले धेरै सकरात्मक समाचाहरु पनि लेखेको कुरा सायद मेरा आदरिणय पाठक र श्रोतालाई अवगत गराउनु पर्दैन होला । सुनौ त्यो असारे १५ को मेरो स्थलगत रेडियो रिर्पोट पनि सकरात्मक सन्देश दिने खालकै होला भन्ने ठानेर ढिलै भए पनि आज यसै साथ सुनाउन चाहन्छु ।